Xenix, Unix an'i Microsoft. | Avy amin'ny Linux
Xenix, Unix an'i Microsoft.
jorgemanjarrezlerma | | GNU / Linux, hafa, soso-kevitra
Avy amin'i Microsoft dia tsy misy afaka hahagaga ahy intsony. Fotoana vitsy lasa izay, nikaroka sy nandinika ny tantaran'ny orinasa voalohany nifantoka tamin'ny Linux sy Unix ny batterin'izy ireo, hitako fa manana karazana Unix an'ny azy manokana i Microsoft.
Araka ny voasoratra ao amin'ny Internet, azo lazaina fa: Microsoft XENIX dia rafitra miasa toa ny UNIX novolavolain'i Microsoft ary nomena fa tsy nanana fahazoan-dàlana hampiasa ny anarana hoe "UNIX" izy io dia nanapa-kevitra ny hanome io anarana io.
Tamin'ny 1979, Microsoft dia nividy fahazoan-dàlana Rafitra UNIX V AT&T ary nanambara tamin'ny 25 aogositra 1980 ny fikasan'izy ireo hampifanaraka azy amin'ny microprocessors 16-bit fa tsy mandeha izany.
XENIX dia tsy namidy mivantana tamin'ny mpampiasa farany, fa ny Microsoft kosa dia nivarotra fahazoan-dàlana amin'ireo mpanamboatra solosaina izay te hampiasa azy io amin'ny solosain'izy ireo. Ny fampifanarahana voalohany an'ny XENIX dia natao ho an'ny microprocessor Zilog Z8001.
Nivoaka ny XENIX i Microsoft rehefa nanao sonia fifanarahana hampivoatra ny rafitra fiasa OS / 2 miaraka amin'ny IBM. Nifanaraka tamin'ny SCO i Microsoft hivarotra ny zony amin'ny XENIX aminy ho takalon'ny 25% an'ny SCO.
Ny SCO dia nizara seranana XENIX ho an'ny processeur Intel 80286 tamin'ny 1985. Ity famotsorana ity dia narahin'ny seranan-tsambo ho an'ny processeur Intel 80386, izay fantatra amin'ny anarana hoe XENIX System V i386.
SCO Unix dia orinasa tsy miasa intsony satria ny fitoriana napetrany tamina orinasa marobe (Novell sy IBM indrindra) dia nanameloka sazy ara-bola ary tamin'ny didim-pitsarana nanamelohana azy dia voatery nangataka ny fiarovana ny lalànan'ny fatiantoka an'ny United Ny fanjakana ary tamin'ny Aogositra 2012 dia nangataka ny fandehanana any amin'ny toko faha-7 amin'ny lalàna voalaza izy, izany hoe ny fandravana amin'ny fatiantoka.
Tsy fantatro izay hevitrao fa misaotra ny mpamorona noho ny tsy fahitan'i Microsoft fahitana; Unix ary vokatr'izany Linux (kernel an'ny rafitra miasa Unix maimaim-poana) dia nihazakazaka tamim-pahasambarana satria ireo rafitra miasa ireo dia azo antoka kokoa, azo antoka ary avo lenta izay nofinofisin'ny rafitra fiasan'i Microsoft.
Azonao an-tsaina ve ny zavatra mety hitranga raha tsy nandao azy toy ny tamin'ny OS / 2 i Microsoft? Ny marina amin'ny fieritreretana azy fotsiny dia mahatonga ahy ho maloiloy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Xenix, Unix an'i Microsoft.
Tsy andriko ny hahita an'i Apple mijaly amin'ity tranga ity ihany.
Andraso, mipetraha! indrindra tsy raharahako izay ataon'ny paoma amin'ny fivoarany! Fantatro ihany fa mampiasa rindrambaiko tokana aho. Toy izany koa no azo lazaina ho an'i Microsoft. Tsy andriko ny hahita an'i Microsoft mijaly amin'ity tranga ity ihany. fa satria tena tsy maninona amiko io, inona no mahasamihafa azy!
Hahaha, fantatro fa nofinofy lavitra izany, saingy hitranga izany indray andro any ary tsy hitsahatra hihomehy aho avy eo. xD
Apple dia mivarotra vokatra lafo vidy, elitista be loatra, ary ny Apple dia tsy midika hoe manana anjaran-tsena be loatra an'ny mpampiasa holazaina, ka iza no mahalala izay mety hiafaran'ny fiainana, dia tsy ampoizina ny fiainana.
Toy izany koa teto, efa fantatro ny momba an'i Xenix, raha vao nanomboka nitady ny faka sy ny karazany ao amin'ny Unix aho, anisan'izany i Solaris.
Manantena aho fa indray andro any dia ho any amin'ny helo i Apple ary handoa izay ilainy ao amin'ny FreeBSD, manao azy io ho ara-barotra, ary tsy manome vola na mamerina kaody mendrika izy ireo. X.org, zavatra mahafinaritra inona …………………………… ..
Raha miresaka momba ny Sco ianao dia mbola tsy nanjavona, novidian'ny Unxis inc ihany fa voatazona ny serivisy! Raha miresaka momba an'i Xenix ianao dia tsy tao an-tsain'i Microsoft fotsiny ny hanana patanty ao amin'ny Unix. Tsy mbola nahita ny tena vintana fampandrosoana tokoa i Microsoft tamin'io sehatra io !! Te hanana sombin-tsena unix fotsiny aho !! eto dia apetrako ny tranokala sco ankehitriny http://www.sco.com/
Araka ny voalazanao dia marina fa tolotra mbola atolotra fa araka ny filazany, taloha toy ny taloha ary ankehitriny toa izao (fehezanteny Indio Cajeme avy any avaratr'i Mexico). Marina ihany koa fa ny Microsoft dia meope ampy (ho an'ny furtiveness an'ny tsirairay) ary nanokan-tena fotsiny izy hanao kopia ratsy an'ny sasany amin'ny Unix ary avy eo Linux.
Unix no "Big Dada" an'ny rafitra fiasan-dresaka, ny olon-drehetra efa niara-milalao aminy. Ho ela velona Unix.
k301 dia hoy izy:
Manantena aho fa tsy hijanona tsy mitovy ny hoavin'ny Barrelfish. Ity tetik'asa ity, izay loharano misokatra, dia hamaha ny olan'ny mari-trano mihombo isan-karazany, ary tsy ratsy ny manokana lahatsoratra ho azy na eo aza ny vokatra navoakan'ny fiaraha-miasa miaraka amin'i Microsoft.
Valiny amin'ny k301
linuxman R4 dia hoy izy:
Tsara ny OS / 2, nialoha kely ny fotoany. Nahita ekipa niaraka tamin'i Xenix aho indray mandeha, saingy efa taona maro lasa izay dia kely no tadidiko.
Valio ny linuxman R4
Tadidinao ve ny OS / 2? Ny Version 3 Warp dia ambony lavitra noho ny Windows tamin'ny lafiny rehetra, ka navelan'i Microsoft ny fiaraha-miasa amin'ny IBM ary natsipiny tany amin'ny hype satria fantatr'izy ireo fa tsy manana vintana hanohitra an'io izy ireo!
Raha tsy diso aho dia misy vondrom-piarahamonina manohy mampivoatra sy manohana ny OS / 2 4 na ny fork amin'io.
SCO mampihomehy, mendrika azy ireo tanteraka, nanjavona izy ireo, trollers patanty raha misy ...
Ny kely "Minosoft" misy ao amin'ny Unix, Linux, OSX, telefaona ary solosaina ary na aiza na aiza io teny io dia ho sambatra kokoa.
Paikadin'ny mogul solosaina hahazoana sombi-mofomamy!
PS: Heveriko fa raha navoakan'izy ireo tamin'ny alàlan'ny GPL izany dia tantara hafa hehehe 😛
Tsy misy mahatadidy fa ny UNIX dia mitentina € 3000.
Ny fahasoavan'ny Linux dia manana OS maimaim-poana mitovy amin'ny 3000 € isika.
Apple dia nahatsapa efa ela lasa izay ary ny kernel dia FreeBSD
Ary tsy ho gaga aho raha miafara amin'ny kernel nix i MS. Ary koa, mahagaga ahy ny tsy nanaovany azy io hametra ny tsy fahombiazany amin'ny ARM ary noho izany amin'ny telefaona sy takelaka.
Amin'ny fotoana rehetra, ry rahalahiko, tadidio fa ny microsoft koa dia manampy amin'ny fanatsarana ny kernel linux tsy mahagaga raha ny windows 9 dia miaraka amin'ny kernel linux fantatrao milamina kokoa tsy misy viriosy ary miaraka amin'ireo mety ho fanaraha-maso sy any an-kalamanjana toy ny mahazatra, ankehitriny dia vitsy ny viriosy ary izy ireo dia ho avy miaraka amin'ny zava-baovao namorona kernel teknolojia avo lenta izay tsy mamela viriosy hiditra ary hiteny izy ireo fa nanova ny rafitra fiasa Microsoft.
Tsy hitranga izany satria ny ankamaroan'ny programa dia mifanaraka amin'ny linux XD
Inqina be dia be miaraka amin'i Microsoft no hanome fery anao. Mbola tsy azoko ny antony hiarovanao ny rafitra GNU / Linux mifototra amin'ny fanafihana OS hafa
Ny SO tsirairay dia toy ny amin'ny kileman-toetrany sy ny hatsarany ary misy fomba tsara kokoa hiarovan-javatra, toy izay manipy diky sy manangona ao anaty harona fitafiana maloto tsy misy olona, ​​satria ny olona rehetra, ary rehefa miteny aho fa ny tsirairay dia samy manana akanjo maloto miaraka amin'ny palomino hafa. amin'ny gayumboson-dry zareo.
"Azonao an-tsaina ve ny zavatra mety hitranga raha tsy nandao azy toy ny tamin'ny OS / 2 i Microsoft? Ny tena marina amin'ny fisainana fotsiny dia mahatonga ahy ho maloiloy. "
Ny tena nahasosotra ahy dia ny famakiana ity fanehoan-kevitra ity.
Mazava ho azy fa hadalana ny "miaro" ny GNU / Linux manafika ny shit Micro $, hadalana fotsiny satria GNU / Linux TSY mila arovana na inona na inona, ny mifanohitra amin'izay no izy, io no fenitra vaovao.
Raha ny momba ny "fanafihana" an'i Microsoft dia heveriko fa tsy izany, raha misy miteny ny peste an'i Microsoft dia satria ny lohahevitra itenenany ratsy momba an'i Microsoft dia mamadika ny vavony, maro ireo lohahevitra ireo ary miovaova arakaraka ny mpampiasa sy ny zavatra niainany tamin'io orinasa ratsy toetra io ary ny «sist tsy mendrika azy. miasa ». Afaka miresaka maharitra mandritra ny ora maro ny amin'ny maha-mediocre an'i Microsoft:
1. teknolojia fototra tsy misy dikany
2. fomba amam-panao orinasa navoaka
3. fitsaboana mpanjifa mampalahelo
4. Filozofia ny: mandidy anao voalohany aho ary mandoa anao, avy eo mandoa anao foana aho ary manohy mandratra anao.
5. rafitra fahazoan-dàlana ampihimamba
6. fomba fanao tsy ara-dalàna, farafaharatsiny farafaharatsiny: Secure Boot?
Afaka nandeha nandritra ny ora maro sy ora maro aho.
Mazava ho azy fa eto irery no tsy manana hevitra mahamenatra momba ny hoe Microsoft na Windows na izay soloin'izy ireo dia ianao, fa raha lazaina fotsiny dia handraraka ny fantsona rehetra toy ny ambin'ny mpampiasa GNU / Linux ianao. manafika ianao.
Betsaka ny zavatra mahatonga ahy mandroraka, fa eo amin'izy ireo dia tsy rafitra fandidiana, miaro anao aho fa ho an'ireo olona tsy manana fiainany manokana dia tokony hialokaloka ao anaty rafitra iray. miasa mba hahatsapa ho mifamatotra amin'ny zavatra iray.
Ho ahy ny rafitra miasa dia zavatra ampiasako amin'ny asako isan'andro, tsy mahatsiaro ho mifamatotra na mankahala olona aho, mampiasa azy ireo fotsiny aho araka ny toetrany, ny mety, ny filany ary ny fisian'ny fotoana. Izay ataon'ny orinasa ao ambadik'ireny OS ireny dia toa tsara kokoa na ratsy kokoa amiko, ary tsy niditra hanombatombanana azy ireo aho.
Raha izany no izy, azonao atao ve ny manondro ny ampahany amin'ny hevitro izay hanafihako ny sisa amin'ireo mpampiasa GNU / Linux araka ny teninao? Moa ve izany manafika ny tenako? Amin'ny ampahany lehibe amin'ny fiainako iza no nanafika aho? Afaka mamaky mihoatra ny anao ve ny Taliban? soratra masina no mibaiko? Tsy azonao atao ve ny manana "hevitra mampihomehy" amin'ny fahalalana mamaky teny sy tsy maty manandrana?
«Betsaka ny zavatra mahatonga ahy ho reraka, fa eo amin'izy ireo dia tsy misy rafitra fandidiana, tahiriziko ho an'ny olona tsy manana fiainana manokana izany ary mila miala amin'ny rafitra iray. miasa mba hahatsapa ho mifamatotra amin'ny zavatra »
Raha lazainao ho ahy dia diso ianao ry rahalahiko, tsotra fotsiny fa io no rivotra iainako isan'andro manomboka izao: a) Ankafiziko ho fialamboly b) Manam-bintana aho mivelona amin'izany c) noho izany dia tsara vintana aho raha velona avy ny zavatra tiako d) toa ny zavatra tiako sy izay tiako ary oh! vintana! Ny vondrona namako dia natokana ho an'ny IT ihany koa, ny rafitra miasa sy ny haitao hafa no lohahevitry ny resaka isan'andro =)
"Ho ahy ny rafitra miasa dia zavatra ampiasako amin'ny asako isan'andro, tsy mahatsapa fifamatorana na fankahalana na amin'iza na amin'iza aho, mampiasa azy ireo tsotra fotsiny aho arakaraka ny toetrany, ny fahafaha-manao, ny filany ary ny fisian'io fotoana io."
Mazava ho azy, satria mpampiasa farany ny teknolojia tsy hainao ianao ary mazava fa tsy liana amin'ny fahatakarana ianao dia ampy anao ny hamindrana fo amin'izy ireo.
"Izay ataon'ny orinasa ao ambadik'ireny OS ireny dia toa tsara kokoa na ratsy kokoa amiko, ary tsy nanome lanja azy ireo aho."
Toa mendrika ny fiantsoana ny hevista - toa misy zavatra tsy dia misy dikany ve??
Raha te-hanapa-kevitra momba ny zavatra tokony ho fantatrao ianao ary mazava ho azy fa tsy fantatrao -ary betsaka- momba ilay lohahevitra.
Ohatra: tsy miraharaha ny OS na ny orinasa ianao, te hampiasa vokatra iray fotsiny amin'ny tanjona iray ... tsara, azo ekena izany, azo takarina tsara ary ara-dalàna, tsy ny rehetra no mirona amin'ny lafiny teknika ny zavatra na, mbola tsara kokoa, hahafantarana ny antony andehanan'ny zavatra sy ny fomba fiasan'izy ireo - ary manomboka eo dia manova, manatsara sns.
Na izany aza, satria tsy mandray an'io asa io ianao dia tokony hisoroka ny fanamelohana soatoavina ary hialana amin'ireo hevitra tsy misy dikany sy tsy misy dikany toa ilay nataonao ary novaliako.
Fa maninona no vendrana sy tsy mahalala fomba? Eny, satria olona tsy mahalala izay lazainy no lazain'izy ireo nefa mbola mihevitra fa misy lanjany ny heviny, inona na inona hoy izy ireo.
Mariho, tompokolahy malala fanitsiana, mpiaro ny mahantra sy ny tsy eo, vakio ity manaraka ity izay hanampy anao hanafoana:
Niezaka nanapaka ny tranokala foana i Microsoft tamin'ny alàlan'ny browser Internet Explorer. Misy zavatra antsoina hoe World Web Consortium (w3c.org) ary nandritra ny taona maro dia niasa mba hamorona fenitra tranonkala iray mba hahafahan'ny mpandrindra rehetra manana rafitra teknika iraisan'ny asa ary izany rehetra izany dia miteraka fampiasana teknisiana loharanon-karena tsara kokoa sy traikefa farany tsara kokoa ho an'ny mpampiasa, androany fotsiny dia afaka milaza isika fa nahavita fandresena azo antoka tamin'ny politika mampidi-doza an'ny Microsoft (orinasa arovanao satria tsy fantatrao izay lazainao) misaotra, betsaka, ny fanohanan'ny fototra Mozilla.
Ahoana no nanampian'i Mozilla? Amin'ny alàlan'ny fampiatoana an'i Microsoft tsy hanandrana hanaparitaka ny tranonkala amin'ny tranokalanao intsony.
Inona no antsoinay hoe manapaka tranonkala? Satria nampihatra nandritra ny taona maro i Microsoft (farafaharatsiny manomboka amin'ny IE6 ka hatramin'ny IE8) andiany tsy fetezana sy fitaovana teknika ka tsy maintsy ampifanarahan'ny mpandrindra ny tranokalanay mba hihazakazaka amin'ireto mpitety tranonkala ireto, manaparitaka ny fifandanjana amin'ireo sisa amin'ireo mpitety ny tsena manaraka maimaimpoana. ny fenitra sy ny fampiharana ny fomba fanao izay nahatonga ny tranokala hiasa tsara amin'ny mpijerin'i Microsoft ihany ary amin'ny sisa amin'ireo mpitety tranonkala dia niasa tsy mahomby izy ireo na voafetra ny fahafaha-manao azy: ny zavatra notadiavin'i Microsoft dia ny fanafoanana ny fifaninanana amin'ny fikatsahana hanidy ny tranokala afa-tsy amin'ny browser-nao ihany, ary tranga maro, miankina amin'ny fampiharana fotsiny izy io mba hahafahany mamorona tranokala mihazakazaka ao amin'ny tranokalanao ... mitohy?
Tsy vitan'ny nanandrana nanidy ny tranonkala ho an'ny fampiasanany manokana i Microsoft - tadidio fa androany dia heverina ho lova ara-kolotsaina mahaolona ny tranonkala - fa nanandrana tamin'ny fomba rehetra ihany koa izy mba hialana amin'ny famoronana endrika rakitra maimaimpoana ho an'ny fifanakalozana data.
Tantara kely: hatramin'ny vao tsy ela ny vokatra mandeha ho azy an'ny birao Microsoft no fari-pitsipika farany satria ny orinasa sisa tsy nanana tombony izay nananan'i MS tamin'ny rafitra napetraka ary noho izany no manjaka manerantany ... tsara, rehefa firenena eropeana maromaro, notarihin'i Alemana, Suisse, France ary Belzika dia nanapa-kevitra fa tsy afaka miankina amin'ny teknolojia bebe kokoa amin'ny orinasa amerikanina izy ireo amin'ny filan'ny antontan-taratasin'izy ireo, manomboka mamolavola drafitra hamoronana endrika rakitra maimaimpoana sy manerantany izy ireo, ambonin'izany rehetra izany tsy misy karazana, ho an'ny fifanakalozana. ny fampahalalana, endrika iray izay azon'ny olona te-hamorona karazan-rakitra rehetra.
Mazava ho azy, ny antsoantso tany an-danitra dia avy lavitra avy amin'i Microsoft, izay nahita avy hatrany ny fizarana tsena lehibe an'ny Biraon'izy ireo very satria, raha manana safidy hafa hamoronana sy hifanakalo antontan-taratasy ny olona, ​​afaka mampiasa maimaimpoana io format io ny tsirairay, ho azy tampoka ny rehetra. amin'ny vokariny 🙂
Fohy ny tantara: na dia nanandrana nanimba ny hevitry ny endrika rakitra maimaimpoana nandritra ny taona maro aza izy ireo, dia misy ankehitriny ny LibreOffice, izay mampiseho fa ny olona miaraka dia afaka manao mihoatra noho ny orinasa tsy misy fangarony toa an'i Microsoft.
Fampahalalana farany iray: rehefa nanambara i Microsoft fa misy fiarovana vaovao tafiditra ao amin'ny rafitry ny Vista, izay nahatonga ny rindrambaiko antivirius sy antimalware ho tsy ilaina intsony, dia niantso tamin'ny lanitra ny indostria nilaza fa nanimba ampahana asa lehibe i Microsoft ary raha nanao izany , olona an'arivony maro no tsy an'asa, orinasa marobe ary orinasa fiarovana no tsy maintsy nakatona (ny tena mpamitaka dia Agnitum, orinasa Rosiana namorona ny Agnitum Outpost).
Ny valintenin'i Microsoft, fa tsy nilaza hoe: "Ry zalahy, ny antimalware dia nameno akany iray izay tsy ampy tamin'izany fotoana izany, efa lany andro androany" dia "Oops, azafady!" ary ninia nisafidy ny hanao ny logiciel-ny !!! Lozao ilay mpampiasa !!! Izany no fahitan'i Microsoft.
Mazava ho azy fa tsy fantatrao izany, tsy manana hevitra mampihomehy ianao, bah, satria araka ny filazanao azy dia tsy miraharaha ny famonoana ilay milina fotsiny ianao, amin'ny fampiasana azy ary amin'ny famonoana azy, izay averiko fa tsy ratsy, fa satria ianao tsy t mahafantatra zavatra be dia be ny tsara indrindra azonao atao dia ny manidy ny ortho rehefa tsy fantatrao izay lazainao.
"Raha izany no izy, azonao atao ve ny manondro ny ampahany amin'ny hevitro izay hanafika ny sisa amin'ireo mpampiasa GNU / Linux araka ny teninao?"
Eny, mazava ho azy, antsasaky ny hadalana ianao, sa tsy izany?
"Ny tena nahasosotra ahy dia ny famakiana ity fanehoan-kevitra ity."
Marina ny lazain'ilay bandy mahia: afa-tsy amin'ny fotoana tsy fahita firy izay ataon'ny Microsoft fa misy fotony nefa mazava ho azy, ny genius toa anao tsy mahalala an'izany, ny fialantsiny dia ny maneho ny tsy fahalalany voalaza.
Moa ve manafika ny tenako izany? Amin'ny lafiny inona lehibe amin'ny fiainako no nanafihako? Afaka mamaky mihoatra an'izay ambaran'ny soratra masina masina azy ve ny Taliban? Moa tsy afaka manana «hevitra mampihomehy» hahay hamaky izy ireo ary tsy ho faty raha manandrana? »
Raha te ho velona ianao dia zavatra roa no mazava:
1. Mpamitaka be ianao izay miteny mafy.
2. Mpamitaka be ianao izay miteny mafy.
Aza mieritreritra an'izay tsy fantatrao. Inona no ho fantatrao amin'izay ampiasako na ajanoko tsy hampiasa ireo rafitra fiasa samihafa sy izay fantatro na tsy haiko intsony ny momba azy ireo.
Hamaly ny fanafihana / faniratsirana ataonao manokana aho, saingy manala tena ny tenanao ianao ka tsy mendrika handaniam-potoana. Mianara miteny (manorata) fa aza soloina amin'ny ompa izay tsy azonao tratry ny faharanitan-tsainao.
Tsy hiteny anao akory aho, fa holazaiko anao ny zava-drehetra na raha tianao, dia tsy hanome anao varimbazaha aho noho ny tsy fiantsoanao anao hoe Rodrigo.
msx Azafady, tsy misy fandikan-dalàna na famoahana fepetra manokana momba izany.
Samy manana ny heviny ny tsirairay, ary raha irinao hajaina ny anao dia tokony hajao ny ambiny.
Ampianaro mitazona ny filaminana hatrany ity tranonkala ity 😉
Miala tsiny KZ, tsy mahalala fomba ianao, tsy hiverina intsony izany.
Misaotra anao roa noho ny fahazoana, indrindra fa scaamanho fa tsy very ny cool my
msx mahatsapa ho ao an-trano ianao, toy izao ara-bakiteny ... ary ao an-trano, rehefa tonga ny mpitsidika iray ary tsy mitovy ny fomba fijerinao, tsy maniratsira azy ve ianao, sa tsy izany? haha 😉
Ny olona toa anao sy ilay adihevitra mahazatra hoe "Mamono ny PC aho, mampiasa izay ilaiko ary mamono azy" no sakana sy mpanimba ny informatika. Rehefa eo ambany fifehezan'ny orinasa ny mpampiasa ary tsy miraharaha na inona na inona satria manome azy izay ilainy izany, dia sarotra ny tolona ataon'ireo izay mitady ny marina.
Zavatra maro izay ampiasainao sy hitanao ara-dalàna ankehitriny toy ny fidirana amin'ny tranonkala misy browser na hery rindrambaiko endrika maimaimpoana no namboarina miady amin'ny eritreritra toa anao.
Tsara kokoa ny mahafantatra hoe avy aiza ny zava-drehetra ary raha ho an'ny orinasa toa an'i Microsoft androany dia tsy hisy Internet ary tsy hanome hevitra momba izany ianao, satria i Bill Gates dia niaro ny fampiasana PC teo an-toerana, ho an'ny haino aman-jery sy fampiharana, izay nanoratra boky mihitsy aza taty aoriana fa tsy maintsy natelina. Taratra ny lehilahy !! Ohatra, tsy raharahako ny mividy kiraro Nike fa fantany fa vokatry ny fanararaotana ny ankizy mahantra izy ireo satria tsara sy manome fahafaham-po ny filako.
Ny faran'ny famoahana na famoahana an'ity lohahevitra ity avy amiko, dia nifarana toy izao:
1.-Ataovy mazava tsara fa na eo aza ny politikany sy ny fomba fandraharahana, Microsoft dia iray amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny haitao fampahalalana.
2.-Maninona ny fanjakan'i Microsoft eo amin'ny tsenan'ny PC dia nahazo tombony bebe kokoa tamin'ny fankasitrahana nataon'ny vahoaka Apple tamin'ny fotoana tena lehibe (taona 90), izay namela ny fifehezana sy ny fanodinana ny fivarotana PC dia mpilalao iray ihany: Microsoft.
3.-Momba ny fanaovana fahatsiarovana ny niandohan'ity orinasa ity, maro aminareo no tsy nikasika azy ireo (satria ny ankamaroany na ny sasany dia teraka tany am-piandohan'ny taona 90 tany amin'ny taona 80). Ny tantara dia natao handraketana ny zava-nitranga tamin'ny sivilizasiantsika ary noho izany dia naoty izay tokony (ampiasaina) hialana amin'ny fanaovana ireo lesoka teo aloha.
Tamin'ny faran'ny taona 80 sy tany am-piandohan'ny taona 90, ny tontolon'ny PC dia tsy nitovy tamin'ny androany ary zavatra maro izay ataontsika ho manam-pahaizana manokana izao dia manam-pahaizana manokana sy guru izay manana ny fahaizana vy hahatratra azy io sy eo amin'ny tontolon'ny PC an'ny olombelona tsotra izao, Tsy azo natao mihitsy ny namadika rendez-vous satria tsy nanana ny herin'ny computing izay ananany ankehitriny.
Na izany na tsy izany, toy ilay lahatsoratra momba an'i Bill Gates izay nataoko andro vitsy lasa izay, dia ny fanehoana ny antony mahatonga ny zavatra maro. Ny tontolon'ny OpenSource dia manana hatsarana lehibe ary ny iray amin'izy ireo dia ny fahalalahana, saingy indraindray io fitahiana io dia mivadika fahafaham-baraka noho ny haavon'ny tsy fandeferana misy.
Elav sy ny maro hafa dia namoaka tamin'ny bilaogy isan-karazany sy tranokala manokana izay tsy namaranan'ny Linux ny fiaingany ary, raha ny fijeriko manokana (MASO-TIA) dia misy ny fifanolanana, ny fizarazarana ary ny tsy fandeferana ary ambonin'izany rehetra izany ny tsy fahampian'ny fanarahana fenitra ny fizotrany. tsy manana ny POWER ilaina, raha resaka ara-barotra, dia fifaninanana mifanohitra amin'i Microsoft sy Apple ambonin'izany rehetra izany.
Heveriko fa i Cannonical dia miasa mba hialana amin'ity stereotype ity amin'ny fiezahana milalao anao ho anao manohitra ireto kilasy roa ireto (na dia i Novell miaraka amin'i SUSE sy IBM aza), manantena aho fa hahita fahombiazana izy ireo satria io dia mamela ny ambin'ny fizarana hampiharihary ny hatsarany ary manana fahaizana mifaninana am-pahibemaso.
Izaho dia mpampiasa Linux hatramin'ny nanombohan'ity taonjato ity (faha-21 na faha-XNUMX) ary ny marina dia marina tokoa, tsy malahelo an'i Microsoft na i Apple mihitsy aho satria manana izay ilaiko rehetra amin'ny asako, eny fa na dia ny Windows na MacOS aza virtualize. manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifako.
ary izaho, izay mbola manana iray velona ...:
Ratsy tokoa ny fanohanan'ny cd-rom, tsy nisy olona afaka nanome ahy tanana ve dia izahay no manoratra azy? 😉
Ny zava-maharikoriko rehetra an'i Microsoft amin'ny sasany dia mahatonga ahy tsy hahalala zavatra (lazaiko azy amin'ny fanajana feno), indrindra amin'ity tranga ity fa tsy ho fantatsika velively izay mety hitranga, angamba mety ho lasa vokatra tsara izany na tsia, fa tsy ny zavatra rehetra. Ratsy i Microsoft, ary manomboka amin'izy ireo ny ankamaroantsika.
Raha ny tokony ho izy, mino aho fa azoko antoka fa nisy ihany koa ny kinova amin'ny Internet Explorer ho an'ny Unix taona maro lasa izay (IE nokaoka tokoa, na ny kinova farany aza nihatsara)
Boot azo antoka: ny Linux Foundation to the Rescue.
Manampy amin'ny fisafidianana sary masina LibreOffice amin'ny alàlan'ny fanadihadiana